Tsika Wamini Unganidzo Machina, Fenicha Inoita Kuti Zvigadzirwa Zvekushandisa | Shangrui Machina
Shangrui zvigadzirwa, sarudzo dzepamusoro, Enters | Machinai Machina inyanzvi yehunyanzvi hwekugadzira michina yemuchina, fenicha inogadzira zvigadzirwa zvekushandisa
Musangano musangano musangano
Kupera Chilling Machine
Shangrui Woodworking Machina
Zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi kuti vagadzire uye kuburitsa zvisina kujairika michina.
Shangrui Machina Anonyatsoita kuti aumbe yebhodhi yakasimba uye yakasimba yemashini yekugadzira midziyo (fenicha inogadzira michina), zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi kuti vagadzire uye kubereka mari yemuchina (senge press muchina).
Inopisa muchina muchina yakakodzera kune yepakati kana diki yemurume-yakagadzirwa bhodhi fekitori
Yakakodzera svikiro kana diki-yakagadzirwa bhodhi fekitori maviri ekugadzirisa mafekitori, pakuvakira trayes MDF, MELAMINE DECKTOR THE, BOLPHOROF BHUKU, Simbi Foil, Yakasarudzika uye yakasikwa micro mutete matanda, zvakasikwa mossic; Zvakare inogona kushandiswa seyekuomesa kuomesa mwero, kuyambuka, ruvara rwekushongedza huni dzakaiswa
Yakagadzirirwa multilayer fireproof board inopisa chengetedza mashandisirwo emuchina kushandiswa kwefekitori fekitori
Yakakodzera svikiro kana diki-yakagadzirwa bhodhi fekitori maviri ekugadzirisa mafekitori, pakuvakira trayes MDF, MELAMINE DECKTOR THE, BOLPHOROF BHUKU, Simbi Foil, Yakasarudzika uye yakasikwa micro mutete matanda, zvakasikwa mossic; Zvakare inogona kushandiswa seyekuomesa kuomesa mwero, kuyambuka, ruvara rwekushongedza huni.
Yakagadzirirwa Cold Cold Press Machine Inoshandiswa muWindows Door Factory
Cold Press: inonyanya kushandiswa mumapuranga ematanda efaira, kunze kwemadziro ezvinyorwa zvekunze, huni-dzakavakirwa paneli fekitori yekumanikidza, kuwanda. Gadzira iyo mune maitiro ekuoma glue, kwete nyore kuburitsaDeformation uye degumming. Iyo inoshandiswa zvakanyanya mufekitori rehuni, huchi, muchidimbu, kuumbwa, mushure mekubatanidza glue kudzvanya.Iyo inotonhora yakadhinda iri nyore kushanda uye nyore kushandisa. Iyo yakazara muchina anogamuchira chiteshi chechiteshi uye simbi yemapururu uye inosimbiswa seyakazara. Chimiro chakasimba. Oiri cylinder inogamuchiraYakasimba Gomba Simbi, yakashongedzwa, chrome yakarongedzwa, yakasimba simba, kwete nyore kutsausa. Iyo pani yakagadzirwa nealuminium Alloy. Munguva yekufambisa-kureba-kureba, iyo pani yakagadzirwa nealuminium alloyHapazovi nokusuwa. Iyo inotonhora madzvanyiriri yakagadzirwa nekambani yedu yadarika CE CRECTION uye inotengeswa zvakanaka mumisika yemimba uye yekune dzimwe nyika. Shangrui Machina,Ndiyo sarudzo yako chete uye chiratidzo cheupfumi chisikwa.
yakagadzirirwa tafura saizi yekudzokorora yakaona trimming sawine muchina
yakagadziriswa tafura saizi kudzoreredza kuona trimming sawine muchina.
Shanangui Machina izhizha razvino rekugadzira michina&Fenicha inogadzira zvigadzirwa zvebhizinesi iyo inobatanidza dhizaini, kukura, kugadzirwa, kuisirwa, pre-kutengesa, kutengesa uye mushure mekutengesa uye mushure mekutengesa uye mushure mekutengesa uye mushure mekutengesa uye mushure mekutengesa uye mushure mekutengesa uye mushure mekutengesa.
Neboka remhando yepamusoro trite, zvigadzirwa zvakanakisa zvigadzirwa uye zvekuyedza zvishandiso. Kuongorora kwechigadzirwa, maitiro emhando yepamusoro anonyatsogadziriswa.
Pfungwa yehuwandu uye pragmatism inokurudzira zvigadzirwa zvechines shanangruy kuti uenderane nekambani yemusika, tekinoroji yakakwana, yakakwana mushure mekutengesa mushure-uye yakagadzira mhando yeShangrui Machina masheya.
COMILIZDE 650T inopisa chengetedza Machine Mugadziri
Mukushanya kwechipiri kune chirimwa, General Tao uye nyanzvi vakasarudza kudzvinyirira kweChipiri 650t inopisa, kupisa kwakanyanya kwemuchina kunogona kusvika 180 degrees. Mr. Tao ave akanaka kwazvo pamusoro pemuchina wedu kubva akaedza iyo 400t Press mune yedu fekitori nguva yekupedzisira. Asi nekuda kwekuparadzwa, haana kumbowana mukana wekukurukura zvakadzama zvemushini. Mushure mekushanya uku, takamupa mugamuchire uye takamuratidza iyo manyama uye michina iri kugadzirwa mufekitori. Kubva pane chimwe chikamu chega chekare kusvika simbi ndiro, mutengo wakanyatsoiswa chiratidzo uye kuratidzwa kwemuviri kunopihwa. Vafambi vakamuperekedza zuva rese kuti vakurukure naye, uye vakamupawo nesarudzo-inoshanda kwazvo. Kunyangwe iyo ruvara rwemuchina rwakafanana, zvekufambisa, kuisirwa uye kusunungura zvakare kwakabatsira kupa marudzi akasiyana siyana.
Shangrui Machine Co, Ltd. inowanikwa muS Sunnde, Guangdong Province
Shanangui Machina izhizha razvino rekugadzira michina&fenicha nokuparira midziyo (akadai muchisviniro machine) zvebhizimisi iyo integrates design, budiriro, kugadzira, kugadzwa, kwerubwinyo rwakagara rwuripo sale, kutengeswa uye pashure-okutengesa basa. Neboka remhando yepamusoro trite, zvigadzirwa zvakanakisa zvigadzirwa uye zvekuyedza zvishandiso. Kuongorora kwechigadzirwa, maitiro emhando yepamusoro anonyatsogadziriswa.
Shangrui Machinery kushandisa kugadzirwa zvakasiyana-siyana muchikepe uye chikukutu huni fenicha kugadzirwa midziyo (akadai muchisviniro machine), maererano siyana zvinodiwa vatengi kugadzira uye kubudisa non-mureza michina.
Kana iwe uine mimwe mibvunzo, nyorera
Kuzvitsaurira kupa vashandisi neExquisite tekinoroji uye yeiyo mhando service.
Copyright © 2021 Shangrui Machinery Co., Ltd. - www.gdshangrui.com All Rights Reserved.